Tilmaamaha qaarkood inaad maskaxda ku hayso inaad iibsato TV cusub | Ragga Stylish
Si loo doorto telefishan cusub, waa inaad tixgelisaa dhinacyada qaarkood. Qalabka elektarooniga ah sidan waxaa badanaa loo doortaa cabirkooda; Si kastaba ha noqotee, kumbuyuutarku maahan kaliya shaashad weyn, waxaa jira astaamaha kale ee muhiimka ah ee la tixgelinayo marka la dooranayo, sida tayada muuqaalka, dib u eegista isticmaalaha, iyo kuwo kale.
Waa muhiim in la ogaado waxa ay tahay muddada ay shirkaddu na siiso iyo waa maxay waqtiga nolosha dhabta ah sida ay adeegsadayaashu sheegeen; qaabkan waxaan u qorsheyneynaa muddada dhabta ah ee alaabta si sax ah.
Tilmaamaha Iibsashada TV-ga Cusub
Door noocee ah ayuu telefishanka ka ciyaari doonaa? Si loo helo telefishan, waa inaan marka hore ka fikirno xagee dhigeynaa shaqadeena fulineysaa. Annagoo si cad u tixgelinayna meesha bannaan ee la heli karo, oo sidaas ayaan ku ogaan karnaa cabirrada ay yeelan karto iyo astaamaha ugu muhiimsan ee doorkan. Tusaale ahaan, TV-ga oo aan dhigi doono qolka fadhiga Ma lahaan doono hal inji sida kan aan jikada ku ridi lahayn.
Waxaa jira noocyada qaraarada, tayada sawirku waxay ku xirnaan doontaa astaamahan. Go'aannada aad la imaan kartid waa kuwa soo socda, oo laga soo amro kan ugu hooseeya illaa kan ugu sarreeya: HD, Full HD, 4k iyo Ultra HD.
Waxaa jira saddex nooc oo shaashad ah: LEDWaxay ka samaysan yihiin muraayad dareere ah oo la cadaadiyey oo ay ka buuxaan LED-yo yaryar, kuwaas oo la hawlgaliyo marka imika la helo, helitaanka sawirka; LCDWaxay la mid yihiin LED-yada, laakiin leh gidaarado muraayad ah oo lagu ifiyo laambad dhalaalaya; plasma, sawirka waxaa lagu soo koobay iyadoo la marayo qaybo yaryar oo plasma ah.
Isbarbardhiggu waa awoodda tayada muuqaalka marka la eego midabaynta waxay ka dhigan tahay.
La tamarta, taas oo si toos ah u saameynaysa kharashka aan ku jiri doono mustaqbalka fog. Tusaale ahaan, shaashadda 'LED' waxay isticmaashaa tamar ka badan kan plasma-ka.
Ilaha sawirka: ADSZone / TLife.guru
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » nololeedka » Tiknoolaji » 5 talooyin oo ku saabsan doorashada TV cusub
Sidee laysugu daraa surwaal fudeyd xagaagan